सय वर्षसम्म किन लोकप्रिय सीपीसी?-CRI
सय वर्षसम्म किन लोकप्रिय सीपीसी?
सन् २०२१ जुलाई १ तारिख चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीले आफ्नो एक सयौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। सीपीसी वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी हो। साथै ७२ वर्षदेखि अबिछिन्न सत्तारुढ दलका रुपमा यसले इतिहास सिर्जना गरेको छ। सीपीसीका ९ करोड २० लाख सदस्य छन्। त्यसो त १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको चीनमा जम्मा ६ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक मात्र सीपीसीका सदस्य रहेका छन्। सीमित चिनियाँहरु सीपीसीका सदस्य रहे पनि आम चिनियाँमा सीपीसी अत्यधिक लोकप्रिय बनेको छ।
सन् २०२० मा अमेरिकी हार्भड विश्वविद्यालयले गरेको एक सर्वेक्षणमा चीनमा सीपीसी र सरकारप्रतिको लोकप्रियता दर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। ताजुबको कुरा त के छ भने विश्वमा कुनै पनि मुलुकमा सत्तारुढ दल र सरकारप्रतिको विश्वासनीयता र लोकप्रियता दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन। यस्तो लोकप्रियतादर सरदरमा ५० प्रतिशतभन्दा न्युन हुने गर्छ। तर सीपीसीको लोकप्रियतादर यति उच्च हुनुका केही कारणहरु छन्।
कोरोना महामारी बढेपछि विश्वमा सर्वत्र सरकार र सत्तारुढ दलप्रतिको विश्वासनीयता तथा लोकप्रियतामा व्यापक गिरावट आएको छ तर चीनमा चाहिँ सीपीसी र सरकारप्रतिको विश्वासनीयता तथा लोकप्रियता बढेको छ। सन् २०२० को सुरुमा कोरोनाले चीनलाई गाँजिरहेका बेला केही अमेरिकी प्रोफेसरहरु चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको सत्ता धरापमा परेको भन्दै कथित विश्लेषण गरिरहेका थिए। उनीहरुले चीनबाट कम्युनिष्ट सत्ता नै ढल्ने सम्मका भविष्यवाणी पनि गरेका थिए। तर अहिले त्यही अमेरिकी विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा सीपीसी र चिनियाँ सरकारको लोकप्रियता विश्वमै सबैभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ।
राजनीतिमा सामान्यतः नयाँ सत्ता र नयाँ सरकार पुरानोभन्दा लोकप्रिय हुने गर्दछन्। नयाँप्रति आलोचना गर्ने र असन्तुष्टि जनाउने प्रश्वस्त आधारहरु बनिसकेका हुँदैनन् तर पुरानाप्रति मान्छेहरु दिक्क भइरहेका हुन्छन्। त्यसोभए एक सय वर्षको इतिहास बोकेको सीपीसी चीनमा दिनदिनै अझ बढी लोकप्रिय हुनुपर्ने खास कारण के हो त? अझ यो पार्टी विगत ७२ वर्षदेखि चीनको सत्ता समालेर बसेको छ। यसका केही रहस्य छन् जसलाई छोटकरीमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
पहिले कुरा, सीपीसी र चिनियाँ सरकारले जनतालाई सदैव प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। जनतालाई प्राथमिकता राखेकै कारणले चीनमा कोरोना महामारी नियन्त्रण संभव भएको हो। सन् २०१२ मा सीपीसीको १८ औँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित सी चिनफिङले जहिल्यै पनि जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि पार्टीका हरेक सदस्यलाई निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ। उहाँले गर्ने हरेक सम्बोधनमा पनि जनतालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने विषय समेटिएका हुन्छन्। गरिबी निवारणमा पनि कुनै एउटा व्यक्ति पनि छुट्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त लिएर चीनले काम गरेको छ। तसर्थ सीपीसीको लोकप्रियताको पारो चढिहरेको छ।
दोस्रो कुरा, गरिबी निवारण हो। सी चिनफिङ सत्तामा आएको ८ वर्षमै चीनले ९ करोड ८९ लाख ९० हजार मान्छेलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ। हरेक नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारलाई नै मानव अधिकार भनिन्छ र गरिबी निवारण गरेर चीनले विश्वमै उत्कृष्ट मानव अधिकार प्रदर्शन गरेको छ। सी चिनफिङ केन्द्रित सीपीसीको नेतृत्वमा रहेको चीन सरकारले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, जेष्ठ नागरिकको संरक्षण जस्ता विषयलाई ग्यारेन्टी गरेपछि नागरिक खुशी हुनु र सरकार तथा सत्तारुढ दलप्रति खुशी हुनु स्वाभाविक हो।
तेस्रो कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण। सी चिनफिङ सत्तामा आउनासाथ उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सून्य सहनशीलता अपनाउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सी चिनफिङले सीपीसीकै उच्चस्तरका नेताहरुबाट काम थालनी गरे। चिनियाँहरुको एउटा उखान छ, भर्‍याङ र भ्रष्टाचार माथिबाट बडार्नुपर्छ। हो, यही भनाइलाई चरितार्थ गर्दै सीले कठोर अभियान चलाएपछि भ्रष्ट नेता हालयकालय भए। भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भयो। चीनमा भ्रष्टाचार गरेर अमेरिका लगायतका विभिन्न देशमा लुकेका चिनियाँहरुलाई धमाधम स्वदेश फर्काएर कारवाही गरियो। कयौँ नेतालाई मृत्युदण्ड पनि दिइयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएपछि विकास निर्माणका काम तीब्र भए। जनताका निम्ति काम भए। सरकारी अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौति गरियो। यी सबै कामबाट जनताले राहत पाए र सीपीसी तथा चीन सरकारप्रति लोकप्रियता बढ्यो।
चौथो कुरा, सफल र सबल नेतृत्व। सीपीसीको एक सयौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सी चिनफिङले सीपीसीले मूलतः चारवटा वृहत सफलता प्राप्त गरेको औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयोः 'सीपीसीले चिनियाँ जनताको मुक्ति र एकताका लागि संघर्ष गरेको छ। सीपीसीको नेतृत्वमा सशक्त चीन निर्माण भएको भएको छ। सीपीसीको नेतृत्वमा चीनले सुधार र खुलापन अँगाल्दै चिनियाँ चरित्रको समाजवादी व्यवस्थामा हिँडाएको छ। र, सीपीसीको नेतृत्वमा चिनियाँहरुको आत्मविश्वास, आत्मभरोसा र आविष्कारले नयाँ युगमा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद विकास भएको छ।' सीले औँल्याउनु भएका यी चारवटा वृहत सफलताका लागि सीपीसीको नेतृत्व सफल र सबल छ।
पाँचौ कुरा, देशक्तिको भावना। चीनले असङ्ख्य घरेलु समस्यासँगै कयौँ वाह्य समस्यासँग संघर्ष गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी गठबन्धनले हङकङ, तिब्बत, सिन्च्याङ, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर जस्ता विषयमा चीनमाथि लान्छना लगाउने, चीनको आन्तरिक मामिलामा खुलेआम हस्तक्षेप गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनको बदनामी गर्ने, चिनियाँ नागरिक तथा चिनियाँ उत्पादनलाई भेदभाव गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो बेला समग्र चिनियाँलाई एउटै मालामा उनेर देशभक्तिको भावना पैदा गराउने काम सीपीसीले गर्दै आएको छ। सन् १९३१ देखि १९४५ सम्म सीपीसीकै नेतृत्वमा चिनियाँ जनताले जापानी अतिक्रमणकारका विरुद्धमा युद्ध गरेका थिए। सन् १९४९ मा नयाँ चीन स्थापना भएपछि पनि चीनले निरन्तर विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्धमा युद्ध गर्दै आएको छ। सी चिनफिङले आफ्नो कार्यकालमै ताइवानलाई मातृभूमि चीनमा समाहित गराउने दृढ सङ्कल्प लिनु भएको छ। यी सबै कुरा चिनियाँमा भएको देशभक्तिको भावनाले गर्दा सफल भएको हो। सीपीसीले चिनियाँमा देश भक्तिको भावना विकास गराएको छ र त्यो विश्वका अन्य मुलुकमा कतै नभएको अनुपम मानिन्छ।
छैटौँ कुरा, विकास निर्माण। आज जे छ चीनमा छ। चीनलाई विश्वको कारखाना भनिन्छ। चीनले द्रुत गतिमा विकास गरेको एउटा उदाहरण हो सन् २०११ देखि २०१३ सम्म चीनले प्रयोग गरेको सिमेन्टको खपत अमेरिकाले विगत एक सय वर्षमा गरेको सिमेन्टको खपतभन्दा बढी थियो। भनिन्छ चीनले दिन दुई गुना रात चौगुना विकास गरिरहेको छ। चिनियाँहरु भन्छन् 'तपाईं चीनको कुनै पनि ठाउँमा ६ महिनापछि पुग्नुभयो भने विल्कुन नयाँ अनुभव गर्नुहुन्छ।' यसको अर्थ हो चीनले द्रुत गतिमा गरिरहेको विकास निर्माण। अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। केही वर्षमै अमेरिकालाई उछिनेर चीन विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ। विश्वका ठूला विकासका उदाहरण सबै चीनमा छन्। चीनको भौतिक पूर्वाधारसँग कुनै पनि देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। विकासले गर्दा आज विश्वमा चिनियाँको इज्जत, प्रतिष्ठा र मानसम्मान बढेको छ। विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी चीनले भित्र्याएको छ भने विश्वमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने मुलुक पनि चीन नै बनेको छ। विकासका प्रतिफल अरुलाई पनि बाँड्नका लागि चीनले बीआरआई महा अभियान अगाडि सारेको छ जसले विश्वमै विकास बाँडिरहेको छ। विकास भएर नागरिकको मानसम्मान बढेपछि सीपीसी र चीन सरकार लोकप्रिय भैहाल्यो नि।
सातौँ कुरा, सीपीसीको कडा अनुशासन। लेखको सुरुमा उल्लेख छ जम्मा ६ प्रतिशत चिनियाँहरु मात्र सीपीसीका सदस्य रहेका छन्। यति लोकप्रिय पार्टीमा किन थोरै सदस्य? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सीपीसीको सदस्य हुन त्यति सजिलो छैन। सी चिनफिङले पनि सीपीसीको सदस्य बन्नका लागि दिएको आवेदन ९ पटकसम्म अस्वीकृत भएको थियो। दसौँ पटकको प्रयासमा मात्र उहाँ पार्टी सदस्य बन्न सफल हुनु भएको थियो। पार्टीको सदस्य बन्नका लागि आवेदन दिएपछि त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि, आनीबानी, पार्टीमा पुर्‍याएको योगदान, योग्यता र क्षमता लगायतका कुराहरु हेरेर निश्चित समयसम्म निगरानी राखिन्छ र मात्र सदस्यता स्वीकृत हुन्छ। अनि सदस्य भइसकेपछि यसलाई कायम राख्न पनि उत्तिकै कठिन छ। सीपीसीको हरेक सदस्यले कडा अनुशासनको अनुसरण गर्नुपर्छ। जस्तो सुकै व्यक्ति सीपीसीको सदस्य बन्न सक्दैन। थोरै गल्ती तथा कमिकमजोरी भएमा कारवाही सुरु भइहाल्छ। छानिबिनमा परेपछि निलम्बन हुन्छ। एकपटक पार्टी सदस्यबाट निस्काशित भएपछि त्यही व्यक्तिले अर्कोपटक सदस्यता लिन सम्भव हुँदैन। जनताका निम्ति काम गर्नका लागि जनतासँगै रहनुपर्छ। जनताले भोगेका दुःखसुख आफ्नै जस्तो ठान्नुपर्छ। सीपीसीका महासचिव सी चिनफिङ चीनका राष्ट्राध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ बेइजिङको सुखसयल छोडेर हरेक वर्ष फरक फरक चीनका दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर जनताका कुरा सुन्ने गर्नुहुन्छ। गरिब जनताले के खान्छन्, कस्तो खान्छन्, उनीहरुको घर कस्तो छ, कस्तो ओछ्यानमा सुत्छन्, औषधि उपचारको सुविधा के कस्तो छ, शिक्षा तथा बिमा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति बुझेर उहाँ नीति बनाउनुहुन्छ। सी चिनफिङले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतामा पुगेर उनीहरुको समस्या बुझ्नलाई निर्देशन दिने गर्नुहुन्छ। यदि कोही पार्टी सदस्य दुर्गम क्षेत्रमा जान नमानेमा, जनताका दुःख नबुझेमा, भड्किलो जीवनशैली अपनाएमा, पैसा अथवा पैत्रिक सम्पतिको तुजुक देखाएमा पार्टीको अनुशासन कारवाहीमा पर्दछ। आखिर जनतामा नेता भिझेपछि सिङ्गो सीपीसी र चीन सरकार नै जनतामा लोकप्रिय भइहाल्यो नि।